Telenor Group & The Norwegian Government - immediately stop the sale of Telenor Myanmar to military-linked Investcom - Action Network
243,614 Signatures Collected
Only 165,986 more until our goal of 409,600
If you are not already subscribed, would you like to receive email updates from Blood Money Campaign, Global Myanmar Spring Revolution - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး, No Business With Genocide, Global Movement for Myanmar Democracy, Global Actions against the Myanmar Junta, International Campaign for the Rohingya, Campaign foraNew Myanmar, and CRPH Support Group, Norway? * Yes, opt in to email updates No, do not opt in
Telenor Group & The Norwegian Government - immediately stop the sale of Telenor Myanmar to military-linked Investcom
Jonas Gahr Støre (Norway Prime Minister), Sigve Brekke (President & CEO of Telenor Group), Petter-Børre Furberg CEO of Telenor Norway
Scroll down for Burmese and Norwegian languages
Norwegian Telenor is planning to sell Telenor Myanmar by February 15, allowing the user data of more than 18 million Telenor customers in Myanmar to fall into the hands of Myanmar military-affiliated Investcom. Telenor Group must stop the sale completely and safeguard its users’ data to protect their lives.
Users have entrusted Telenor with highly sensitive information including SIM card registration, call logs, internet logs, location data, mobile money usage, and historical activity records.
Investcom has strong military links
Shwe Byain Phyu Group isacrony business that initially started its first company in the 1990s, and it has been allowed to operateanumber of businesses involved in gem mining, the import and export of fuel for military- owned businesses under successive military regimes.
Thein Win Zaw, the president of Shwe Byain Phyu, held his position as one of the directors of Mahar Yoma Public Company until November 2021.
Mahar Yoma company isamajor shareholder in Myanmar National Telecom Holding Public Co. Ltd which owns shares in MyTel in which the terrorist Myanmar military isamajor shareholder.
Through companies registration database, Thein Win Zaw was found to step down from his position from Mahar Yoma just two weeks before acquiring the shares from Investcom Pte Ltd under the name of Shwe Byain Phyu Telecom.
This action could be an attempt to hide links with the military conglomerate, Myanmar Economic Corporation (MEC), which is sanctioned in the EU,US and UK. Tin Latt Min, the wife of Thein Win Zaw, and the current managing director of the group, is alsoashareholder in the EU-sanctioned Forest Products Joint Venture Corporation.
Investcom's remaining shares are owned by the Lebanese-based M1 Group, which has been linked to the terrorist military and conducts business through the Cayman Islands,atax haven and secrecy jurisdiction.
Proceeds from the sale will support the military junta and atrocity crimes
The sale of Telenor Myanmar toagroup of companies that support the interests of the terrorist military will support the military junta, which has been prosecuted in international tribunals foranumber of crimes, including genocide and crimes against humanity.
There is no guarantee owners of the newly obtained telecom business will respect human rights and protect users, with proceeds continuing to fund the junta’s atrocities in the future.
Telenor must follow international human rights norms and legal frameworks to protect users and employees
Asamember of both the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Global Network Initiative (GNI), Telenor has committed to business and human rights guidelines as well as the European Union privacy rules (GDPR).
Telenor is solely responsible for the security of its users’ data in Myanmar. Telenor is also responsible for any harm that users might suffer, including loss of life, asaresult ofasecurity breach, and for the deletion of their information if requested by the user.
The Norwegian Government hasa53.97% stake in Telenor Group and therefore making itamajor shareholder of Telenor Group!
This means that the Norwegian Government hasacontrolling interest in the Telenor Group and it is within its power to stop this sale. The Norwegian Government should uphold the values of Norway, uphold the European Union privacy rules (GDPR) for these 18.3 million users of the Telenor Group and exercise its power asamajor shareholder to STOP this profitable sale of handing out 18.3 million users' data to the Myanmar military junta. The Norwegian Government and its Prime Minister, Jonas Gahr Støre, has an obligation to protect the customers of the Telenor Group. Failing to stop this sale will put 18.3 million people's lives at stake and will undermine the pro-democracy movement, embolden the military junta to continue to commit more atrocities, grave human rights violations, and have severe humanitarian impacts for years if not decades.
Myanmar Now: Telenor sale to military-linked consortium to be complete in mid-February
The Washington Post: Data complaint filed against plan to sell Telenor Myanmar
Associated Press: Norway’s Telenor sells Myanmar operations to M1 Group
The Irrawaddy: Myanmar Companies Linked to Regime Leaders Bid to Acquire Telenor
Access Now: Open letter to the Prime Minister of Norway: stop the sale of Telenor Myanmar to M1 Group
နော်ဝေးအခြေစိုက် တယ်လီနောအုပ်စုအနေဖြင့် တယ်လီနောမြန်မာအား အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနှင့် ဆက်စပ်သော Investcom အား ရောင်းချရန် ပြင်ဆင်နေပြီး အသုံးပြုသူ ၁၈ သန်း၏ ဒေတာအချက်အလက်များ သည်လည်း Investcom မှတဆင့် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်ဝယ်သို့ ကျရောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တယ်လီနောအုပ်စု အနေဖြင့် ရောင်းချမှုအားချက်ခြင်း ရပ်တန့်ပြီး အသုံးပြုသူများ၏ အသက်အန္တရာယ်အထိပါ စိုးရိမ်စေရမည့် ဒေတာအချက်အလက်များကိုလည်း ကာကွယ်ပေးရန်လိုသည်။
အသက်အန္တရာယ် ထိပါးနိုင်သည့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိခြင်း
အသုံးပြုသူများသည် မိမိတို့၏အရေးကြီးသောအချက်လက်များဖြစ်သော (ဆင်းကဒ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် ဖြည့်သွင်းရသည့် အချက်အလက်များ (Sim card registration data)၊ အသုံးပြုသူများ၏ ဖုန်းခေါ်ဆို အသုံးပြုမှု၊ အင်တာနက်သုံးစွဲမှု မှတ်တမ်းများ မည်သည့်နေရာက သုံးစွဲခဲ့သည် ဆိုသည့် မှတ်တမ်းများ အပါအဝင် ဖုန်းနံပါတ် အသုံးပြုသော mobile banking အသုံးပြုမှုများ၊ wave money ကဲ့သို့ ငွေသွင်း ငွေလွှဲ မှတ်တမ်းများ) စသည်တို့ကို တယ်လီနောအား ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် အပ်နှံအသုံးပြုနေကြပါသည်။
တယ်လီနောကို ဝယ်ယူမည့်ကုမ္ပဏီမှတဆင့် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှ ထိုအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူ အားလုံးအပါအဝင်၊ ဆက်စပ်သူများ၊ မိသားစုများပါမကျန် ထိုအချက်အလက်များပေါ် မူတည်၍ ဖမ်းစီး၊ ထောင်ချ၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရနိုင်ပါသည်။
စစ်အုပ်စုများဖြင့် ဆက်စပ်သော Investcom
အဆိုပါ သတင်းဖော်ပြချက်အရ Investcom ၏ ရှယ်ရာ အများစုပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် ရွှေဗျိုင်းဖြူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များကတည်းပင် ၄င်းတို့၏ အစောပိုင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ပြီး အဆက်ဆက်သော စစ်အစိုးရများ လက်ထက်များတွင် စစ်တပ်ပိုင် လုပ်ငန်းများအတွက် လောင်စာဆီ ဝယ်ယူ တင်သွင်း ရောင်းချမှုများနှင့် ကျောက်မျက် တူးဖော်ခြင်းများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းအများအပြား လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည် ခရိုနီလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွှေဗျိုင်းဖြူ ၏ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဦးသိန်းဝင်းဇော်သည် Mahar Yoma Public Company တွင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး အဖြစ် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ လဆန်းပိုင်းအထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ Mahar Yoma သည် Myanmar National Telecom Holdings Public Company Limited ၏ အဓိက ရှယ်ရာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ MHTH သည် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက အဓိက ရှယ်ရာများ ပါဝင်သည့် MyTel ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတွင် ရှယ်ရာပါဝင်ထားသည်။ ရွှေဗျိုင်းဖြူ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ရွှေဗျိုင်းဖြူ တယ်လီကွန်း ကုမ္ပဏီအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ မှတ်ပုံတင်ပြီး ၂ ပတ် အတွင်းနှင့် Investcom Pte Ltd ထံမှ ရှယ်ရာ မဝယ်ယူခင် ရက်ပိုင်း အလိုကြမှသာ အဆိုပါ Mahar Yoma ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်ကို ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ရွှေဗျိုင်းဖြူ အနေဖြင့် လက်ရှိ US၊ UK၊ နှင့် EU စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခံထားရသည့် အကြမ်းဖက် စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ဆက်စပ်မှုများကို ခြေရာဖျောက်ကာ၊ နိုင်ငံတကာက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် အကွက်ချ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်ရသည်။ ယခု တယ်လီနော မြန်မာ ကုမ္ပဏီအား ၄င်းတို့ ကုမ္ပဏီသို့ ရောင်းချခြင်းကို အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စု၏ နောက်ကွယ်မှ အကွက်ချ စီစဥ်မှု အဖြစ် သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
Investcom Pte Ltd ၏ ကျန်ရှယ်ရာများကိုလည်း အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုနှင့် ဆက်စပ်သည့် လက်ဘနွန် နိုင်ငံအခြေစိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် M1 ၏ လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုကပိုင်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းခွဲသည် အခွန်ရှောင်မှုများ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အခြေစိုက် လေ့ရှိသည့် Cayman Islands တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ထို့အပြင် ရွှေဗျိုင်းဖြူ လုပ်ငန်းစု၏ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းဝင်းဇော်၏ ဇနီးဖြစ်သူ လုပ်ငန်းစု၏ လက်ရှိအုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဒေါ်တင်လတ်မင်း သည်လည်း ဥရောပသမဂ္ဂက စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ထားသည့် သစ်လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သည့် Forest Products Joint Venture Corporation တွင် အစုရှယ်ရာဝင် ဖြစ်သည်ဟု သတင်းများက ဖော်ပြသည်။
ရောင်းချလိုက်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်များသည် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနှင့် ၎င်း၏ ဆိုးရွားလှသော ရာဇဝတ်မှုများကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည်
တယ်လီနောမြန်မာအား ယခုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုများနှင့် ဆက်စပ်သော ကုမ္ပဏီများကိုရောင်းချခြင်းဖြင့် ဤလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသော အကျိုးအမြတ်များသည် နိုင်ငံတကာ တရားရုံးများတွင် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တွင် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများအပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုများစွာအတွက် စစ်ဆေးခြင်းခံနေရသောအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဆီသို့ တစ်နည်းတစ်ဖုံရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
တယ်လီနော၏ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအား ဝယ်ယူမည့်ပိုင်ရှင်အသစ်များသည်လည်း လူ့အခွင့်အရေးများကိုလေးစားလိုက်နာပြီး အသုံးပြုသူများကို ကာကွယ်မည်ဟု အာမခံချက်မရှိသလို၊ အကျိုးအမြတ်များသည်လည်း အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုထပ်မံကျူးလွန်မည့် အကြမ်းဖက်မှုများကိုလည်း ပံ့ပိုးမှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
တယ်လီနောသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့် ဥပဒေများကို လိုက်နာပြီး အသုံးပြုသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား အကာအကွယ်ပေးရမည်
တယ်လီနောသည် Organisation for Economic Co-operation And Development (OECD) နှင့် Global Network Initiative (GNI) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ထိုအဖွဲ့များချမှတ်ထားသော စီးပွားရေးကဏ္ဍနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအများအဝင် ဥရောပသမဂ္ဂ မှချမှတ်ထားသော အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ (GDPR) ကိုလည်း ကိုလိုက်နာရန် ကတိပြုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တယ်လီနောသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုံးစွဲသူများ၏ သတင်းအချက်အလက်များ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန် အပြည့်ရှိသလို၊ အဆိုပါ အချက်အလက်များ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပေါက်ကြားမှုကြောင့် အသုံးပြုသူများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် နစ်နာမှုများ (အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းအပါဝင် အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုများ) စသည့် နစ်နာမှုများအားလုံးအတွက်လည်း တာဝန်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အသုံးပြုသူများမှ တယ်လီနောက သိမ်းဆည်းထားသည့် ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါက ဖျက်ပေးရမည့်တာဝန် အပြည့်ရှိသည်။
တယ်လီနော အနေဖြင့် အောက်ပါ တောင်းဆိုမှုများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
(က) အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှ နောက်ကွက်က ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် Investcom သို့ ရောင်းချခြင်းကို ချက်ခြင်းရပ်တန့်ရန်၊
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်ပါက စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်နှင့် အသုံးပြုသူများ၏ ဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်များ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံသို့ မရောက်စေရန် ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများကို စဥ်းစားလုပ်ကိုင်ရန် (ဥပမာ - လုပ်ငန်း လိုင်စင်ပြန်အပ်ကာ အသုံးပြုသူများ၏ အချက်အလက်အားလုံး ကို အပြီးဖျက်ပစ်ခြင်း)၊
(ဂ) မည်သည့်အခြေအနေ၊ မည့်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို မည်သူကိုမျှ သုံးစွဲသူများ၏ ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လုံးဝ (လုံးဝ) လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း နှင့် မည်သူကိုမျှ လက်လွှဲပေးအပ်ချင်း မပြုရန်၊
နော်ဝေ အစိုးရသည် Telenor Group ၏ ရှယ်ယာအများစု 53.97% ပိုင်ဆိုင်ထားသော ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် နော်ဝေ အစိုးရသည် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံး ဖြစ်သည့်အလျောက် ယခုရောင်းချမှုအား တားမြစ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသူလည်းဖြစ်သည်။ နော်ဝေ အစိုးရအနေဖြင့် နော်ဝေနိုင်ငံ လူသားချင်း စာနာမှု စံနှုန်းများ၊ ဉရောပ သမဂ္ဂ ၏ အထွေထွေ ပုဂ္ဂုလ်ရေးရာ အချက်အလက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု စည်းမျဉ်း ဖြစ်သော GDPR (General Data Protection Rule) တို့ အား လိုက်နာ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၁၈.၃ သန်း သောTelenor အသုံးပြုသူများ နှင့် ၄င်းတို့ ၏ အချက်အလက်များကို စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက် ရှယ်ယာအများစုရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ယခုရောင်းချမှုအား အစွမ်းကုန် တားဆီးရမည်ဖြစ်သည်။ နော်ဝေအစိုးရနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Jonas Gahr Støre အနေဖြင့် တယ်လီနော၏ ၁၈.၃ သန်းသော အသုံးပြုသူများ၏ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် အလုံးစုံ တာဝန်ရှိသည်။ ဤရောင်းချမှုကို တားဆီးနိုင်မှု ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ၁၈.၃ သန်းသော အသုံးပြုသူများ၏ အသက်အိုးအိမ်များအား အန္တရာယ်ကျ‌ရောက်စေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားမှုများအားလည်း ထိပါးစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက် စစ် အုပ်စု အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ ဆက်လက်ကျူးလွန်နိုင်စေရန် လည်း အထောက်အပံ့ပြုရာကျပြီး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ ထိပါးနစ်နာမှု အကျိုးဆက်များကိုလည်း ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထိ ကျန်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။
Norske Telenor planlegger å selge Telenor Myanmar 15. februar, noe som vil gi militær-affilierte Investcom tilgang til brukerdataen til over 18 millioner kunder i Myanmar. Telenor-gruppen er nødt til å stoppe dette salget og beskytte brukerdataen til deres kunder for å beskytte liv og helse.
Det er høy risiko for uforutsigbar vold, inkludert drap.
Brukerne har betrodd Telenor med svært sensitiv informasjon, særlig SIM-kort registrering, anropslogger, internetlogger, stedsdata, bruk av mobil-betaling, og historiske aktivitetslogger.
Alle Telenorbrukere, og deres kontakter og familie medlemmer, står i fare og kan bli arrestert, eller drept basert på brukerdataen som Telenor gir den nye eieren, og dermed militæret, tilgang til.
Ivestcom har sterke tilknytninger til militæret.
Majoritetsaksjonæren i Investcom er Shwe Byain Phyu, en forretning med tilknytning til militæret som er involvert i gruvedrift av edelstener, og som har fått tillatelse til å drive en rekke virksomheter, blant annet import av drivstoff for Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), en statseid bedrift sanksjonert av USA, EU og Storbritannia.
En av firmaets datterselskaper, Mahar Yoma Public Company, er en aksjonær i MyTel Telecommunications, som er majoritetseid av terroristmilitæret.
Investcoms resterende aksjer er eid av det libanesiske M1 Group, som har vært knyttet til terroristmilitæret i forbindelse med skatteundragelse.
Inntekter fra salget kommer til å støtte militærjuntaen og brutale forbrytelser.
Salget av Telenor Myanmar til en gruppe selskaper som støtter terrormilitærets interesser, vil støtte militærjuntaen, som tiltales foran internasjonale domstoler for en rekke forbrytelse, blant annet folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.
Det er ingen garanti for at eierne av den nylig anskaffede telekomvirksomheten kommer til å respektere menneskerettighetene og beskytte brukerne, med inntekter som fortsetter å finansiere juntaens forbrytelser framover.
Telenor er nødt til å følge internasjonale menneskerettigheter og dets juridiske rammer for å beskytte brukere og ansatte.
Som et medlem i både Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Global Network Initiative (GNI), har Telenor forpliktet seg til virksomhets- og menneskerettighets-retningslinjer, i tillegg til personvernsforordningen (GDPR).
Telenor er, ene og alene, ansvarlig for sikkerheten til sine brukere i Myanmar. Telenor er også ansvarlig for en hver skade som deres brukere vil lide, også drap, som et resultat av et slikt sikkerhetsbrudd, og for sletting av informasjon om det forespørres av deres brukere.
● Umiddelbart stoppe slaget til militærtilknyttede Investcom.
● Vurdere alle alternativer til å selge til Investcom, også ny lisensiering, slette all brukerdata permanent, og å stenge ned telekommunikasjonsinfrastruktur.
● Ikke overføre eller selge brukerdata under noen omstendigheter, uansett grunn.
Den norske stat eier 53,9 % av Telenor Group og gjør den til den viktigste aksjeeier i Telenor Group.
Dette betyr at den norske stat har en kontrollerende maktposisjon i selskapet, og kan derfor hindre salget. Den norske regjering bør opprettholde de norske verdier og EUs personvernregler (GDPR) for alle mennesker, og utøve sin makt til å stoppe salget – et salg som gir militærjuntaen tilgang til følsom og kritisk informasjon til 18,3 millioner brukere i Myanmar. Dersom salget ikke stoppes vil det utsette 18,3 millioner mennesker for stor fare, og underminere demokratibevegelsen, styrke militærjuntaen til å fortsette sine overgrep og brudd på menneskerettighetene. Det vil ha alvorlige konsekvenser i mange år – kanskje mange tiår.
To: Jonas Gahr Støre (Norway Prime Minister), Sigve Brekke (President & CEO of Telenor Group), Petter-Børre Furberg CEO of Telenor Norway
We call for Telenor Group to immediately stop the sale of Telenor Myanmar to Myanmar military-affiliated Investcom and take full responsibility for the data of its 18 million users.
The transfer of user data toagroup linked to the Myanmar military isabreach of the Telenor Group’s human rights responsibilities and puts the lives of Telenor users and their affiliates, including their family members, at risk.
User data including SIM card registration, call logs, internet logs, location data, mobile money usage, and historical activity records could lead to arrests, torture, and murder if shared by Telenor to the new owner.
Investcom’s majority shareholder is Shwe Byain Phyu,amilitary-linked business involved in gem mining and fuel import for Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL),astate-owned enterprise sanctioned by the US, EU, and the UK.
One of Shwe Byain Phyu’s subsidiaries, the Mahar Yoma Public Company, hasashare in MyTel Telecommunications, which is majority-owned by the terrorist military.
Investcom's remaining shares are owned by the Lebanese-based M1 Group, which has been linked to the terrorist military in connection with tax evasion.
By selling Telenor Myanmar toagroup of companies that support the interests of the terrorist military, proceeds from the sale will support the military junta, which has been prosecuted in international tribunals foranumber of crimes, including genocide and crimes against humanity.
There is no guarantee owners of the newly obtained telecom business will respect human rights and protect users, with proceeds continuing to fund the junta’s atrocities in the future
Asamember of both the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and Global Network Initiative (GNI), Telenor has committed to business and human rights guidelines.
The Telenor Group must:
●	Immediately stop the sale to military-linked Investcom.
●	Consider all alternatives to the sale to Investcom, including re-licensing, permanently deleting all user data, and shutting down telecommunications infrastructure.
●	Not transfer nor sell user data to anyone under any circumstances and for any reason.
Furthermore, we call on the Norwegian Government to stop this sale. The Norwegian Government ​and its Prime Minister, Jonas Gahr Støre​, has an obligation to protect the customers of the Telenor Group. The government of Norway must uphold the values of Norway, uphold the European Union privacy rules (GDPR) for these 18.3 million users of the Telenor Group and exercise its power asamajor shareholder to STOP this profitable sale of handing out 18.3 million users' data to the Myanmar military junta.